Alahadin’ny SAF FJKM/ 2020. – FJKM
Apokalipsy 15 :3b-4
Hira FFPM 14
Hira 209: 1,3,4
Joela 2 :12 – 17
Matio 12: 38 – 42
Asa 11: 19 – 21
Hira FF 6
Vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy fifonana
Hira 417: 1,3,4
Hosea 14 :5 ; Romana 8 :33-34
Salamo 32 :1-2
Fanolorana ny rakitra : Hira 446 : 2,3.
Hira Fanampiny 17
Misaotra an’Andriamanitra isika noho ny fijoroan’ny Fiangonana FJKM eo amin’ny asa fampandrosoana ataony.
Miatrika ny vanim-potoanany sy ny toetrandro iainany hatrany hatrany ny Fiangonana manoloana ny asa fampandrosoana. Tsiahivina fa miorina eo amin’ny maha olombelona araka ny endrik’Andriamanitra sy ny zo fototra aterak’izany ny vinan’ny fampandrosoana voizina eto amin’ny FJKM.
Amin’izao vanim-potoana iainantsika izao dia lafin-javatra 3 lehibe no itondrana hafatra ho an’ny Fiangonana amin’izao Alahadin’ny SAF/FJKM izao:
tokony hiray fo amin’ny firenena manontolo isika Fiangonana eo amin’ny ezaka atao hanarenana ny fahasimban’ny tontolo iainana vokatry ny fandripahana ala, ny fitrandrahana ireo harena an-kibon’ny tany ; sy ny maro hafa, ka hanao ezaka araka izay tratra amin’ny fambolena hazo.
Entanina ihany koa isika mba ho fitaratra eo amin’ny tontolo misy antsika amin’ny fitandrovana ny fahadiovana amin’ny lafiny rehetra.
Manao ezaka lehibe isika FJKM amin’ny lafiny fananan-tany. Maro ireo Synodamparitany nofanina momba ny lalànan’ny fananantany. Etoana kosa dia manao antso ho an’ireo Synodamparitany sy Fitandremana tsy mbola nahazo izany na koa ireo izay liana mba hifanatona ahafahana manomana fiofanana satria ny fahalalana ny zo sy ny lalàna momba izany ihany no ahafahana miatrika am-pahamendrehana ny fiarovana ny tany ho an’ny tsirairay
Averina ombieny ombieny fa noho ny fiovaovan’ny toetrandro dia firenena miloloha loza voajanahary isika eto Madagasikara eo ny rivodoza sy ny ranobe. Koa miantso ny rafitry ny Fiangonana hanohana ny fandaharanasa Volontera FJKM hahitana fahombiazana amin’ny fiarovana ny mpiara-belona sy ny fananany.
Farany, dia manolotra fisaorana ho antsika Fiangonana amin’ny fanohanana ny asa Fampandrosoana tanterahina amin’ireo sehatra samihafa.
Dia manonona ny Fiadanan’ny Jesoa Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy.
Ny Filankevipitondrana SAF/FJKM